“ ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဘုရား” အပိုင်း(၁) | The Great and Terrible God - Part I | Real Conversion
“ ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဘုရား” အပိုင်း(၁)
၂၀၁၂၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ရက်၊ လောစ့်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့ တဲတော်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်၊ သခင်ဘုရား နေ့ နံနက်ပိုင်း ၊ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသော ဒေသနာတော်၊
ဒေါက်တာ ဂျွန်အာရ်ရိုက်စ်ရေးသားသော “ကြီးမြတ်၍ ကြောက်မတ်ဖွယ်သောဘုရား”ဟူသော ဆောင်းပါးမှ အထူးသဖြင့် ကိုးကားတင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ (ထာ၀ရဘုရား၏ ဓါးစာစောင် ၁၉၉၇-စာမျက်နှာ ၇-၃၈)။ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်နှစ်ခု၌၊ ဘုရားသခင်သည် အလွန်ကြောက်ရွံ့ဖွယ် ဘုရားဖြစ်ခြင်းကို ဖော်ပြထားပါသည်။ နေဟမိဆုတောင်းရာတွင် “အိုကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင် ဘုရားသခင်ထာ၀ရဘုရား၊ ကြီးမြတ်၍ ကြောက်မတ်ဖွယ်သောဘုရား”ဟူ၍ မြွတ်ဆို၏။ နေဟမိ ၄း၁၄ ၌လည်း “ကြီးမြတ်၍ ကြောက်မတ်ဖွယ် ဖြစ်တော်မူသော ထာ၀ရဘုရားကို အောက်မေ့ကြလော့”ဟူ၍ မိန့်ဆိုပါသည်။ နေဟမိ၌လည်း “သို့ဖြစ်၍၊ အိုအကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရား၊ ကြီးမြတ်၍ မဟာတန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံလျှက် ကြောက်မတ်ဖွယ်သောဘုရား”ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ “တန်ခိုးကြီး၍ ကြောက်မတ်ဖွယ်သော သင်၏ဘုရားသခင်ထာ၀ရဘုရား”ဟု တရားဟောရာကျမ်း ၇း၂၁၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ တရားဟော ကျမ်း၁ဝး၁၇ ၌လည်း “ဘုရားတို့၏ ဘုရား၊ သခင်တို့၏သခင်၊ ကြီးမြတ်သောဘုရား၊ တန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံ၍ ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းသောဘုရား” ဟူ၍မိန့်တော်မူပါသည်။ ဒံယေလကလည်း “အလွန်ကြီးမြတ်၍၊ ကြောက်ရွံ့ဖွယ် ဖြစ်တော်မူသောအရှင် ဘုရားသခင်” ဟုဒံယေလ ၉း၄၌ ဖော်ပြ ထားပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်က ဘုရားဟူသည် အဘယ်မည်သော သူဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြ ထားပါသည်။ ဟေရှာယ ၅၉း၁၈ ၌လည်း “သူတို့အကျင့်အတိုင်း အကျိုးအပြစ်ကို ဆပ်ပေးတော် မူမည်၊ ရန်ဘက်ပြုသော သူတို့အား အမျက်တော်ကို၎င်း၊ တကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့အား အကျိုးအပြစ် ကို၎င်း၊ ဆပ်ပေးတော်မူမည်” ဟူ၍ ဖော်ပြထားပါသည်။ ထာ၀ရဘုရားသည် ထိုကဲ့သို့ အပြစ်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး အမျက်တော် သွန်းလောင်းမည့် ရုပ်ပုံကားချပ်ကို ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် သနားခြင်း ဂရုဏာတော်ကိုသာ ဖော်ကျူးနေခြင်းသည်၊ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ဖော်ပြသမျှကို မဖော်ထုတ်၍ ဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်သည် တရားစီရင်ခြင်း နှင့်အပြစ်အကျိုးအဆက်ကို ပေးဆပ်သူဖြစ်သည်။ “အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏လက် တော်သို့ ကျရောက်ခြင်းအမှုသည် ကြောက်မက်ဖွယ်သော အမှုဖြစ်သတည်း” ဟု ဟေဗြဲ ၁ဝး၃၁ ၌ သတိပေးထားပါသည်။ ပညတ်တရားကို မသွန်သင်ဘဲ ကျေးဇူးတရားအကြာင်း သက်သက်ဟောခြင်း၊ နောင်တတရားအကြာင်းမပြောဘဲ၊ ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းဟောကြားခြင်း၊ အမျက်ဒေါသအကြောင်း မဟောဘဲ၊ ဂရုဏာတော်သက်သက် ဟောကြားခြင်း၊ ငရဲအကြောင်းမဟောဘဲ၊ ကောင်းကင်ဘုံအ ကြောင်းကိုသာ ဟောကြားခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ သမ္မာတရားကို ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ် သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဟောကြားခြင်းသည် ဂုဏ်ပြုရန် မထိုက်တန်ပေ။ ဘုရားရှင်သည်၊ ကြောက်မက်ဖွယ် သောဘုရား၊ အပြစ်အကျိုးကို ပေးဆပ်သောဘုရား၊ တရားစီရင်သောဘုရား၊ အပြစ်ပြုသောသူတို့အဖို့ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့် ကြောက်လန့်ဖွယ်ကောင်းသော ဘုရားဖြစ်သည်၊ ဟူသော တရားဒေသနာတော် ကို မဟောကြားကြသနည်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အများသောတရားဟောဆရာတို့သည် ဘုရား ရှင်၏ သမ္မာတရားကို ဟောကြားဖို့ကြောက်၍ ဖြစ်သည်။ မိမိ်တို့အသင်းတော်၌ရှိ မယုံကြည်သောသူ တို့အား ထိုကဲ့သို့သောဘုရားသည် ကြောက်ရွံ့ဖွယ် ဖြစ်သဖြင့် ထိုအသင်းသူ^သားများ မကြား လိုသဖြင့် ၎င်းအသင်းသူ^သားများကို ကြောက်ရွံ့၍ ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် “ဇာတိပကတိ စိတ်သဘောသည် ဘုရားသခင်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်၏” ရောမ ၈း၇ ၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ ဇာတိ ပကတိဘဘောသည်၊ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ကောင်းသော ထာ၀ရဘုရား၏ သမ္မာကျမ်းစာကို ဆန့်ကျင်၍ ဖြစ်သည်၊
ထိုကဲ့သို့သော ဘုရားသခင်အကြောင်းကို မယုံကြည်သေးသောသူတို့အား ကြော်ငြာပြောကြားရပါ မည်။ ဒေါက်တာမာတင်လွှိင်ဂျူးH ပြောကြားသကဲ့သို့
“ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းနှင့် ဆန့်ကျင်ပြီး ဟောကြားခြင်းသည် ဘုရားသခင်ဖော်ပြ နှင့်သောအချက်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်နှင့် ဆက်နွယ်သော အမူအရာပင်ဖြစ် သည်။ ကျွန်ုfပ်တို့၏တသီးပုဂ္ဂလပြသနာတော့မဟုတ်ပါ။ လူသားတိုင်းတို့၏ တူညီ သော ပြသနာပင်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသော ပညတ်တရားအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်၌ အပြစ်သင့်သူဖြစ်စေပြီး၊ အပြစ်ဒဏ်ခံသင့်သူများဟူ၍ ဖော်ပြခြင်းခံရခြင်းဖြစ်သည်။ (Romans, Exposition of Chapter 1, The Gospel of God, The Banner of Truth Trust, 1985, p. 95).
အပြစ်သားတို့ကလည်း ဘုရားရှင်သည် ကြောက်ရွံ့ဖွယ် ဖြစ်ခြင်းကို ကိုယ်တွေ့၊ တွေ့ဆုံပါက၊ ထိုသူသည် အသက်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်သည် ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို ထိုသူသည် သိရှိပါက၊ မိမိသည်အပြစ်သားဖြစ်ကြောင်းနှင့် အပြစ်ဆေးကြောဖို့ ခရစ်တော်ကို တွေ့မြင်ချင်လာပါမည်။
ဘုရားသခင်သည် ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဘုရားဖြစ်ကြောင်း၊ လောင်သောမီးပမာဖြစ်ကြောင်းကို၊ ယနေ့ အသင်းတော်များအား ခြောက်ချားစေပါသည်။ မသာယာသော စိတ်ခံစားမှုကို ဖြစ်စေပါသည်။
ဒေါက်တာ ရိုက်စ် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ထာ၀ရဘုရားကို ကြောက် ရွံ့သင့်သည်ဍ ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် ကြီးမားသော တန်ဖိုးရှိနေသည်ကို သမ္မာကျမ်းတွင် တွေ့ရပါသည်။ ၎င်းသည် ခရစ်ယာန်တို့၏ သန့်ရှင်းသောအကျင့်စရိတ္တပင် ဖြစ်ပါသည်။ စစ်မှန်သော နောင်တရခြင်းနှင့် အသစ်သောအသက်တာ၌ ပြောင်းလဲလာဖို့ အမှန်တကယ်လိုအပ်ပါသည်”။ (ibid).
ဘုရားသခင်ကို ချစ်ရန်၊ အော့စဖေါ့ အနက်ဖွင့်ကျမ်း၌ ကျမ်းပိုဒ် ၁၅ပိုဒ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရား ရှင်ကို ချစ်ရမည်ဟု အမိန့်ပေးထားပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို ချစ်ခြင်းဟူသည် မြင့်မြတ်ခြင်း ပါရမီပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းအနက်ဖွင့်ကျမ်း၌ အကြိမ်လေးဆယ်ခြောက်မက ဘုရားသခင်ကို ကြောက် ရွံ့ရမည်ဟု မိန့်ဆိုထားပါသည်။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် မြင့်မြတ်ခြင်း ပါရမီပင်ဖြစ်ပါသည်။
ထူးဆန်း၊ ဆန်းကျယ်စွာ သမ္မာကျမ်းစာ၌ အချက်(၃)ချက်ဖွင့်ဆိုထားသည်မှာ “ထာ၀ရဘုရားကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် ပညာ၏အချုပ်အခြာပင်ဖြစ်သည်” ဟုမိန့်ဆိုပါသည်။ (သုတ္တံ ၁း၇၊ ဆာလံ ၁၁၁း၁၀၊ သုတ္တံ ၉း၁၀) ထာ၀ရဘုရားကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောသည် အသက်တာကို ရှည်စေတတ်၏ (သုတ္တံ ၁ဝး၂၇၊ ၁၉း၂၃၊၁၄း၂၇)။ ထာ၀ရဘုရားကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် ယှဉ်သော ဥစ္စာအနည်းငယ်သည် သာ၍ကောင်း၏” (သုတ္တံ ၁၅း၁၆)၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော် မြတ်၌ ထိုသို့သောဘုရားကို ချစ်သောသူတို့သည် ထာ၀ရဘုရားကို ကြောက်ရွံ့သောသူများပင် ဖြစ် ကြသည် ဟုဆို၏။ ပညာရှင်ကြီးရှော လမုန်မင်းကြီးကလည်း “အချုပ် အခြာစကားမူကား ဘုရား ရှင်ကို ကြောက်ရွံ့၍ ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ရှောက်လော့။ ဤရွေ့ကား လူနှင့်ဆိုင်သော အမှုအရာ အလုံးစုံတို့ကို ချုပ်ခြာသတည်း” (ဒေသနာ ကျမ်း ၁၂း၁၃)။
သို့ပါသော်လည်း၊ ဇာတိပကတိ လူသားများသည် ဘုရားသခင်ကို မကြောက်ရွံHYကြဟု သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ မိန့်ဆိုထားပါသည်။ ကြောက်လန့်စရာ အပြစ်သားများအကြာင်းကို ရောမ ၃း၉ -၁၈၌ မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ အပြစ်သားတို့အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖြစ်ရပ်များ၊ ဇာတိပကတိ လူသားတို့ ၏ လုံး၀ဥဿုံပျက်စီးခြင်း အကြောင်းများကို မှတ်တမ်းတင်ထားရာတွင် “ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ရသော အကြောင်းသည် သူတို့မျက်စိ၌ မထင်ဟု ကျမ်းစာလာသတည်း” (ရောမ ၃း၁၈)။ ဟုလာပါသည်။
မကြာသေးခင်က လူတစ်ဦးကျွန်ုပ်အား ပြောကြားခဲ့ဖူးသည်မှာ၊ “ဘုရားသခင်ကိုမကြောက်ပါ ဘူး” ဟူ၍ ပြောခဲ့ဖူးသည်။ ထိုသူကမိမိသည် သူတော်ကောင်းတစ်ဦးပါဟု ဆိုပါသည်။ လုံး၀သူတော် ကောင်းမဟုတ်ပါဘူးဍ ထိုအရာက အပြစ်သားတိုင်း တို့၏ ပြောစကားတွေပင်ဖြစ်သည်ဍ “ဘုရားသခင် ကိုကြောက်ရွံ့ရသော အကြောင်းသည် သူတို့မျက်စိ၌ မထင်ဟု ကျမ်းစာလာပါသည်” ဂျွန်နယူး တန်၏သီကုံးသော ဓမ္မသီချင်း “အံ့ဖွယ်ကျေးဇူးတော်” ၌၊ သက်သာခရီး၊ ကြောက်ဖွယ်လမ်းမှာ၊ ကျေး ဇူးတော်စဉ်ရှိပါ” ဟူ၍သီကုံးရေးသားထားပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်က သွန်သင် ခြင်းမရှိဘဲ ဇာတိပကတိ လူသည်ဘုရားသခင်ကို မကြောက်ရွံ့သောသူသည် အပြစ်နွံနစ်နေသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသူသည် ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်နှင့် တရားစီရင်ခြင်း အကြောင်းသတိ ပေးသံကိုမစဉ်းစား၊ သတိမထားကြပေ။ ဘုရားသခင်သည် ကြောက်ရွံ့ဖွယ် ဖြစ်သဖြင့်၊ လူတိုင်းဘုရား သခင်ကို ကြောက်ရွံ့သင့်သည်။
ဧလိ၏သားများ ဘုရားသခင်ကို မကြောက်ကြဘူးဟူသည်ကို သံသယရှိစရာပင်မလိုပါ။ “ဧလိ ၏သားတို့သည် ထာ၀ရဘုရားကိုမသိ အဓမ္မလူဖြစ်ကြ၏ (၁ရာ ၂း၁၂) ၌ဖော်ပြထားပါသည်။ “သူတို့ သည် ထာ၀ရဘုရားကို မသိခဲ့ကြပေ” သူတို့ဘုရားကို မကြောက်ရွံ့သည်ကို သံသယမရှိပါနှင့်။ သူတို့ သည်၊ ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရမည်ဟု မသိခဲ့ကြပါ။ သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ ဖော်ပြသောကြောက် ရွံ့ဖွယ်ဘုရားကို သူတို့မသိခဲ့ကြပါ။ ဧလိ၏သားတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံခဲ့ခြင်း မရှိကြပေ။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်အကြောင်းကို လေးလေးနက်နက် မတွေးခဲ့ကြပါ။ ထိုသူတို့၏အ တွေးထဲ၌ ဘုရားသခင်အဖို့ နေရာမရှိခဲ့ပါ။ “သူတို့သည် ထာ၀ရဘုရားကို မသိ” ဟုဖော်ပြထားပါ သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို သိနားလည်လာဖို့လည်း စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဍ ထိုသူတို့ သည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသည်။ ဘုရားမဲ့များဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် တရားဒေသနာတော်ကို လည်း နားမထောင်လိုကြပေ။ တရားဟောဆရာ၊ ဟောကြားရာတွင်၊ အကယ်၍ လူတစ်ယောက်သည် သခင်ကို ဆန့်ကျင်ပါက၊ မည်သူကသူ့အစား ပြန်ဖြေပေးမည်နည်း၊ ဟုပြောခဲ့သည်။ ထိုသူတို့သည် တရားဟောဆရာ၏ ဟောကြားသောတရားကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။ “သူတို့သည် အဘ၏စကားကို နားမထောင်ကြ၊ အကြောင်းမူကား၊ ထာ၀ရဘုရားသည် ကွပ်မျက်ခြင်းငှါ အလိုရှိတော်မူ၏ (၁ရာ ၂း ၂၅)၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ ပရောဖက်တပါးသည် ပေါ်လာလျှက် “ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည် တနေ့ ချင်းတွင် သေလိမ့်မည်” (၁ရာ ၂း၃၄)ဟူ၍ မိန့်ဆိုခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ဆိုသော်လည်း သူတို့သည် အပြစ် ထဲ၌ ဆက်လက်ပျော်မြူးခဲ့ကြသည်။ သေခြင်းတရားနှင့် ဆုံးမသော်လည်း သူတို့သည် အမှတ်တမဲ့ နေခဲ့ကြသည်။ ပြီးနောက်ဘုရားရှင်သည် လူငယ်ရှာမွေလအားဖြင့်၊ ဧလိ၏သားများ မိမိတို့အပြစ် ကြောင့် သေခြင်းတရားစီရင်ခြင်းခံရမည်ကို သတိပေးခဲ့သည်။ “ရှာမွေလစကားသည်လည်း ဣသရေ လအမျိုးတလျှောက်လုံး ပြန့်နှံ့လေ၏” (၁ရာ ၃း၂၁)၊ သို့ပါသော်လည်း ဧလိ၏သားတို့သည် ထိုသတိ ပေးသံကို နားမထောင်ခဲ့ကြပေ။
ချိန်းချက်သောနေ့ရက်တွင်၊ ဣသရေလလူတို့သည် ဖိလိတ္တိလူတို့ကို စစ်တိုက်ရန်ချီသွားကြသည်။ အခြေအနေသည် အင်မတန်ဆိုးဝါးလှပါသည်။ ဧလိ၏သားများနှင့် လူအုပ်တို့သည် ထာ၀ရဘုရား၏ ပဠိညဉ်သေတ္တာတော်ကို စစ်ပွဲထဲသို့ထမ်းထုတ်ပြီး စစ်တိုက်ကြသည်။ ဘုရားရှင်သည် ဣသရေလတို့ ဘက်၌ “အံ့ဩဖွယ်ရာ” မစလိမ့်မည်ဟု တွေးထင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် အသေအချာကို အမှားကြီး မှားနေခဲ့ကြသည်ဍ သင်လည်းဘဲ ၊ ဘုရားသခင်ကို မကြောက်ရွံ့ဘဲ ဘုရားသခင်သင့်အား မစလိမ့်မည် ဟုမထင်လိုက်ပါနှင့်ဍ “ဘုရားသခင်၏ သေတ္တာတော်သည် ရန်သူလက်သို့ရောက်၍ ဧလိ၏သား ဟောဖိနှင့် ဖိနဟတ်နှစ်ယောက်တို့သည် အသက်ဆုံးလေ၏ (၁ရာ ၄း၁၁)၌ ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းစစ် ပွဲ၌ ဖိလိတ္တိစစ်သားများက ဣသရေလစစ်သားကို သတ်ဖြတ်နိုင်၍မဟုတ်ပါ။ ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ဝင် မပါခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာသည်။ ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်သူတို့ကို သတ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် “ထာ၀ရဘုရားသည် ကွပ်မျက်ခြင်းငှါအလိုရှိတော်မူ၏ (၁ရာ ၂း၂၅)၌ ဖော်ပြထား ပါသည်။ ၎င်းသည် ကြောက်ရွံ့ဖွယ် ထာ၀ရဘုရားက ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ငရဲသို့ပို့လိုက် ခြင်းပင်ဖြစ် သည်။ “ပိုးမသေ၊ မီးမငြိမ်းရာ ငရဲ” (မာကု ၉း၄၈)ဟူ၍ ဖော်ပြထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည် ၌ ကျောင်းတက်စဉ်က သမ္မာကျမ်းစာကို ငြင်းဆန် သော ပါမောက္ခတဦးကို အမှတ်ရနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် ဒီဂရီကို ဆွတ်ခူးခဲ့သည်။ နှစ် အနည်းငယ်အကြာတွင် ကျွန်ုပ်သည် ဒေါက်တာဒီဂရီကို ထိုကျောင်း၌ လေ့လာဆည်းပူးခဲ့ပါသည်။ ထို ပုဂ္ဂိုလ်က၊ ကျွန်ုပ်အားစူးရှစွာဖြင့်ကြည့်ပြီး ကျွန်ုပ်၏ဝင်ခွင့်ပုံစံကို ပစ်ချလိုက်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည် သမ္မာကျမ်းစာကို ကာကွယ်သောသူဖြစ်၍ ဖြစ်သည်။ မကြာမှီလအတွင်း ၎င်းလူ ကြီးသည် မိမိကိုယ်ကို သေနတ်ဖြင့် အဆုံးသတ်စီရင်ခဲ့သည်။ အခြားသောသူတစ်ယောက်ကလည်း ကျွန်ုပ်အား မဟုတ်မမှန် တီဗွီဖန်သားပြင်ပေါ်က ကျွန်ုပ်အားတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ထိုသူသည်လည်းသုံး ဆယ်ခြောက်လအတွင်း အံ့ဩဖွယ်သေဆုံးသွားခဲ့ရသည်။ နောက်တတိယလူကလည်း၊ သားဖျက်ချ ခြင်းအကြောင်းနှင့် ပါတ်သတ်၍ ကျွန်ုပ်ပြောကြားချက်များကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ထိုသူ သည် ငယ်ရွယ်နုပျိုဆဲပင်ဖြစ်သည်။ သို့ပါသော်လည်း နှစ်ဆယ့်လေးလအတွင်း သေဆုံးသွားခဲ့ပါ သည်။ သူတို့သည် သမ္မာကျမ်းစာကို ကာကွယ်သော ကျွန်ုပ်အားတိုက်ခိုက်ကြ၍ ထိုကဲ့သို့ အဖြစ်နှင့် ကြုံရွံ့ဖွယ် တရားစီရင်ခြင်း တွေ့ကြုံရခြင်းအကြောင်းမှာ “သမ္မာကျမ်းစာအရှင် ဘုရားသခင်သည် ကြီး မြတ်၍၊ ကြောက်ရွံ့ဖွယ် ဘုရားဖြစ်ကြောင်း “သူတို့မသိ” သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဍ
သင့်အားမေးပါရစေ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ကောင်းသော ဘုရားသခင်အား သင့်ကြောက်ရွံ့ပါရဲ့လား၊ သင်တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်ဆန်နေသော အချိန်တွင်၊ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ကောင်းသော ဘုရားသ ခင်အကြောင်းကို သင်တွေ့ဖူးပါသလား၊ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ရန် သင်လိုအပ်နေသည်ကို အမြဲ သတိရပါ။ သင်တစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန်နေချိန်တွင်၊ ဆုတောင်းလျှက်ကြောက်ရွံ့ဖွယ် ဘုရားအ ကြောင်းစဉ်စားကြည့်ပါ။ သင်တစ်ကိုယ်ထဲ အထီးကျန်နေချိန် တခုချင်းစီကို ရေတွက်ကြည့်လိုက်စမ်း ပါ။ ယာကုပ်သည် တကိုယ်တည်းညချမ်းချိန်တွင် “အကယ်စင်စစ် ထာ၀ရဘုရားသည် ဤအရပ်၌ ရှိ တော်မူ၏။ ရှိကြောင်းကို ငါမသိ” (ကမ္ဘာ ၂၈း၁၆-၁၇)၌ ယာကုပ်ပြောခဲ့သည်။ ညဉ့်နက်သန်းခေါင် ယံအချိန်၌ “ယာကုပ်သည် တစ်ယောက်တည်းနေရစ်၍ လူတစ်ဦးသည် မိုးလင်းသည်တိုင်အောင် သူ နှင့်လုံ့းထွေးလေ၏ (ကမ္ဘာ ၃၂း၂၄)။ ဤသည် လူသားဇာတိခံယူမည့် သူတစ်ဦးနှင့် ယာကုပ်အသက် တာပြောင်းလဲသည့်တိုင်အောင် နပန်းလုံးခဲ့သည်ဍ အာဗြဟံသည် တစ်ကိုယ်တည်းရှိနေချိန်တွင်၊ ဘုရား သခင်သည် ပဠိညဉ်တရားနှင့်ဆိုင်သော ကတိတော်ကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။ “နေဝင်သောအခါ အာဗြဟံ သည် ကြီးသောအိပ်ခြင်းဖြင့် အိပ်ပျော်လျှက်၊ ထူသောမှောင်မိုက်နှင့် တွေ့၍ ထိတ်လန့်ခြင်းသို့ရောက် လေ၏ (ကမ္ဘာ ၁၅း၁၂)။ ထူသောမှောင်မိုက်နှင့် တွေ့၍ထိတ်လန့်ခြင်းဟူသည်၊ ဘုရားသခင်သည်အာ ဗြဟံဆီသို့ ညဉ့်နက်သန်းခေါင်ချိန်သွားရောက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ ကြီးမားသော အမှောင်ဖုံး လွမ်းသော ဝိညဉ်ဟူသည် ခရစ်ယာန်တို့အတိတ်၌ တွေ့ကြုံကြရသော အထိအတွေ့ပင်ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ မာတင်လုသာ၊ ဘန်ယန်း၊ ဝီစလီ၊ ဝိုက်ဖီးလ်၊ ယုဒသန်နှင့် စပါဂျန်တို့လည်း တွေ့ကြုံခဲ့ကြ ရပါသည်။ သူတို့၏ အသက်တာအသစ်သော အသက်တာ၌ မပြောင်းလဲခင်၊ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သမ္မာ ကျမ်းစာ၏အရှင် ဘုရားသခင်ကို ထိုကဲ့သို့ တွေ့ကြုံခံစားဖူးကြရပါသည်။
သင်သည်လည်း ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့စရာကောင်းသော ဘုရားသခင်နှင့် သင်တစ်ယောက် တည်းနေချိန်တွေ့ကြုံခဲ့ဖူးပြီလား၊ အာဗြဟံ၏ ဘုရားရှင်ထာ၀ရဘုရားသည် သင့်အပြစ်နှင့် အပြစ် ပြည့်နှက်သော သင့်၏စိတ်နှလုံးကို သိနေသည်ဟု သင်ခံစားမိပါသလား၊ သင့်အပြစ်ကို သင်နှင့် ဘုရားသခင်သည်သာလျှင် အမှန်သိနေသည်ဟု သင်ခံစားမိပါသလား၊ “ထူသောမှောင်မိုက်နှင့် ထိတ်လန့်ခြင်း” ညဉ့်နက်အချိန်၌်သာ အာဗြဟံတွေ့ကြုံရသကဲ့သို့ သင်လည်းတွေ့ကြုံပြီးပြီလား၊ (ကမ္ဘာ ၁၅း၁၂)။
အို၊ မိတ်ဆွေ၊ ကျွန်ုပ်တို့လည်း၊ သင်သည် တစ်ယောက်တည်း ညဉ့်နက်သန်းခေါင်ယံချိန်တွင် သင့်အပြစ်ကို သိနားလည်လာပြီး၊ ဘုရားသခင်နှင့် တွေ့ဆုံမိဖို့ဆုတောင်းပေးနေပါသည်ဍ ဧလိ၏သား တို့သည် ထိုကဲ့သို့ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ကို မသိခဲ့ကြပေ။ “အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်သည်သူတို့ ကိုကွပ်မျက်ရန် အလိုတော်ရှိ၏” ဟူ၍ ဖော်ပြထားပါသည်။ ထာ၀ရဘုရားသခင်သည် သင့်ဆီသို့ ရောက်သောအခါ၊ ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဖြစ်ခြင်းနှင့် သင့်အပြစ်အတွက် စိုးရွံ့လာပြီးသင်သည် အသွေးတော်နှင့် ဆေးကြောရန်ယေရှုသခင်သို့ သင့်အပြစ်အတွက် ဆေးကြောသန့်စင်ရန် တိုးဝင်ချဉ်း ကပ်လာမည်ဖြစ်သည်ဍ ထိုကဲ့သို့ တွေ့ကြုံခံစားလာရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။
၁၇၂၃-၁၇၆၁ခုနှစ် ရှာမွေလဒါဝီသည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ နိုးထရေးအတွက် ကျော်ကြားသောတရား ဟောဆရာကြီးတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သူ၏ အမှုတော်မြတ်၌ ဝိညာဉ်နိုးထမှု အကြိမ်ကြိမ် ဖြစ်လာခဲ့ ပါသည်။ ၁၇၅၈ခုနှစ်တွင် ၏ ဥက္ကဌ ၏ နေရာအစားထို သူသည် ဥက္ကဌဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ သူသည် ၃၇နှစ် နောက်ပိုင်းသုံးနှစ်တွင် ကုန်လွန်ခဲ့ပါသည်။ ရှာမွေ လဒါဝီသည်၊ ဘုရားသခင်သည် ကြောက်လန့်ဖွယ်သမ္မာကျမ်းစာ၏ အရှင်သခင်ကို သိမြင်ခံစားခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ မစ္စတာဂရိဖက်စ်သီ ဆိုသွားသော၊ ရှာမွေလဒါဝီသီကုံးသော သီချင်းကို နားထောင်ကြ ပါစို့။
မြေကြီးပင်လယ် ကျောက်တောင်၊ ကျောက်ခဲများ
-အို ပြစ်ရှိလူသား သင့်ဖို့လုံခြုံရာကို
ကျောက်တောင်သည် နှင်းပွင့်ကဲ့သို့ အရည်ပျော်မည်
-ကြင်နာတရား ခိုလှုံစရာ ရှာဖွေမတွေ့ရ
မီးငရဲအိုင်ထဲ လဲလျောင်း နေမည်အစဉ်
(၁၇၂၃-၁၇၆၁၊ ရှာမွေလ ဒါဝီသီကုံးသော “ဇာတိသည်နှစ်မြှုပ်သွား” )။
ကျွန်ုပ်တို့သည်၊ သင့်အသက်တာ၌ ဘုရားသခင်နှင့် အမှန်တကယ်တွေ့ကြုံပြီး အသက်သာပြောင်းလဲ လာဖို့ ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။ သင့်အပြစ်အခနှင့် သေခြင်းအကျိုးရလဒ်ကို သင်သည်နားလည်ပြီး သင့်အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းနှင့် ယေရှု၏အသွေးတော်၌ ဆေးကြောသန့်စင်ရန်၊ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဘုရားသ ခင်နှင့် တွေ့ဆုံပါမည်အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။
-တရားဒေသနာတော် မတိုင်ခင် ဒေါက်တာဂရီတန်အာယ်ချန်မှ ၂သက် ၁း၇-၉ ကိုဖတ်ကြားပေးပါ သည်။
-တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင် ခင်ကိက် ဂရိဖက်စ်မှ (၁၇၂၃-၁၇၆၁၊ ရှာမွေလ ဒါဝီ
သီကုံးသော “ဇာတိသည် နှစ်မြှုပ်သွား” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးပါသည်။